जीवनशैली - कान्तिपुर समाचार
ट्राफिक जामबाट आजित नहुने सायदै कोही होलान्? दिनहुँजसो सडकमा हुने जामले सर्वसाधारणको घण्टौं समय त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ। अझ उकुसमुकुस हुने गर्मी र माइक्रोमा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ।
५० भन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन गरिसकेका चल्तीका युवा द्वन्द्व निर्देशक चन्द्र पन्तलाई भलिउडको रमझमले तानेको छ । त्यसो त कलिउडका विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, रजनी केसीलगायत धेरै कलाकारलाई भोजपुरी चलचित्रले नतानेको होइन ।
अहिले गाडीले मान्छे बोक्छ, उहिले मान्छेले गाडी बोक्थे ! त्यसो त, उहिले पनि गाडीले नै मान्छे बोक्थ्यो । तर समयको यात्रा यस्तो थियो— त्यति बेला कति गन्तव्यसम्म तिनलाई मान्छेले नै बोकेर पुर्‍याउनुपर्थ्यो । अनि मात्र मान्छेहरू त्यसमा यात्रा गर्न पाउँथे ।
‘नेपालमा केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने मानसिकता बनाउँदै आउनुभएको छ भने एकपटक धोबीघाटस्थित अगेनो – द हेस्टियामा जानुहोस् । यो रेस्टुरेन्टले आममानिसका यस्तै धारणालाई ब्रेक गर्न मद्दत गर्नेछ ।
हल्का र शीतल पहिरन
उपत्यकामा गर्मी बढ्दो छ । यसले ‘समर वेयर’ को बजार पनि तात्दै गएको छ । हलुका र शीतल दिने लत्ताकपडा उपभोक्ताको छनोटमा छँदै छ, स्टाइलिस र आकर्षक उत्पादनहरूमा उनीहरूको रुचि पनि बढेको छ । हिजोआज गर्मी मौसमलाई फेसन सिजनको रूपमा पनि लिने चलन छ । सोहीअनुसार उपभोक्ताको रुचिलाई ध्यानमा राखेर व्यवसायीहरूले नयाँ–नयाँ डिजाइनका ‘समर वेयर’ का उत्पादनहरू बजारमा ल्याउने गरेका छन् ।
नेपाली शव्दकोशमा ‘मार्शल’को अर्थ लडाइँमा उपयोगी फौजी कमाण्डर भन्ने छ । शव्दको यो भावार्थ नबुझ्दै कांग्रेस नेता जुलुमकाजी शाक्यले आफ्नो नामअघि ‘मार्शल’ थपिसकेका थिए । टोल–छिमेकमा खेल्दा बाबुआमाले थाहा पाउलान् भनेर उनले नाममा ‘मार्शल’ थपेका हुन् । कालान्तरमा त्यही नाम उनको परिचय बन्यो ।